Piqora: Rich Analytics ho an'ny Pinterest, Instagram ary Tumblr | Martech Zone
Piqora: Rich Analytics ho an'ny Pinterest, Instagram ary Tumblr
Alarobia 21, 2013 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Piqora (Pinfluencer teo aloha) dia marketing ary Analytics sehatra ho an'ny tambajotra hita maso, liana toy ny Pinterest, Tumblr, ary Instagram. Ny suite ataon'izy ireo dia mampiditra metatra fifampiraharahana, diezy, fiovam-po ary fidiram-bola. Piqora dia miara-miasa amin'ireo mpivarotra, marika ary mpanonta fanta-daza fanta-daza hahafantatra sy hifandray amin'ireo mpiaro ny marika manan-kery, hahazo fomba fijery azo tsapain-tanana momba ny sary mihetsika, ary handrefesana ireo metrika fampifandraisana lehibe hamaritana ny fandraisan'ny marika an'ireo tambajotra hita maso ireo.
Ny algorithms mifototra amin'ny fanekena sary an'i Piqora dia ahafahan'ny mpivarotra manara-maso ireo sary, tenifototra, mpanaraka ary mpampiasa manana fitaomana eo amin'ny tamba-jotra toa an'i Instagram, Tumblr ary Pinterest. Ny mpivarotra dia afaka mahatakatra mora foana ny topy maso momba ny fifandraisana ankapobeny, ny sary sy ny tsiro amin'ny mpihaino ary miaraka amin'izay dia afaka miditra anaty tambajotra manokana izy ireo ary mahita ny tatitra feno amin'ny lohahevitra, tenifototra, mpampiasa ary sary.
Mampiasa tenifototra ny olona hanasokajiana ny atiny sy handray anjara amin'ny resaka atao amin'ny Internet. Miaraka amin'i Piqora, ny mpivarotra dia manana fahaizana mahita tenifototra sy mamantatra ireo mpanjifa manerana ireo tambajotra hita maso telo, izay nanonona mazava momba ny marika na lohahevitra mifandraika amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing fanampiny. Amin'ny alàlan'i Piqora, ny mpivarotra marika dia afaka manara-maso tenifototra iray na maro ary mahita sary marika sy rohy mifandraika navoakan'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao.
Piqora dia manolotra ireto sehatra hita maso manaraka ireto:
Pinterest - Fantaro ny tsimatra mitarika, ny firotsahana, ny mety hahatongavana, hahatratra, ROI, fidiram-bola isaky ny pin, fitsidihana isan-pin, fitomboan'ny mpanaraka, reblogs, tiany ary taham-pahavoazana. Ampitahao ny pin, ny repins, ny mpanaraka anao, ny maha-lahy na ny maha-vavy anao, ary ny hetsikao amin'ny fifaninanana ataonao ary ataovy izay hanan-dry zareo paingotra manan-kery indrindra. Ataovy miavaka, aparitaho, ary araho ny fifaninanana, ny famaranana ary ny fampiroboroboana.
Tumblr - Fantaro ny sary malaza sy ny influencer izay miresaka momba ny marikao. Araho ny sary nalaza arahinao sy ny mpijery izay mifangaro amin'ny atin'ny tranokalanao. Fantaro hoe iza no manohitra, mankafy ary manome hevitra momba ny hafatrao ary miaraha miasa amin'ireo mpampiasa manan-kery.
Instagram - Araho amin'ny Instagram ny mombamomba ny marikao. Fantaro ny sary, horonan-tsary, tenifototra ary mpanaraka ambony indrindra. Jereo hoe iza amin'ireo sary nozahana ary jereo ny fanatrarana sy ny maha-virjiny ny marikao. Mpampiasa Instagram kendrena mitondra fiara tianao sy hifaneraserana amin'ny sarinao. Ampitahao ny metatrao, ny sary malaza, ary ny angona mpihaino amin'ny mpifaninana aminao. Fakafakao ny atiny ambony sy ny mpampiasa manan-kery.
Piqora koa dia manana fitaovana CRM sosialy feno ho an'ny Tumblr sy Instagram izay mamakafaka ny resaka ara-tsosialy ary manome hery anao hamantatra sy hanao zavatra mifanaraka amin'ny fikasana hividy.
Ny Networks dia lehibe sy mitombo. Pinterest no tambajotram-piarahamonina centric e-commerce centres faha-3 misy tsimatra 10 Miliara mahery, mitondra fifamoivoizana amin'ny fikasana mividy mahery miaraka amin'ny Revenue / Visitor an'ny $ 1.47 ary sanda amina baikon'ny $ 169. Instagram kosa etsy an-daniny dia sary mifototra amin'ny finday sy tambajotra sosialy miorina amin'ny tenifototra izay manana mpampiasa mavitrika 130+ tapitrisa, sary 16+ miliara nakarina ary tiako 1+ miliara hatramin'ny volana Jona 2013. tambajotra miorina amin'ny zanabola miaraka amina miavaka manerantany 225+ tapitrisa, bilaogy 118+ tapitrisa, lahatsoratra 59+ Miliara ary lahatsoratra 80+ tapitrisa isan'andro (hatramin'ny volana Jona 2013).
Tags: mpanara-diatambajotra saryanalytics instagramanalytics mahombyfampiroboroboana pinterestrepinscrm sosialyfanadihadiana tumblrtambajotra hita maso
Tumult Hype 2 ho an'ny OSX: Mamorona ary manaingo HTML5
Angano famokarana horonantsary 4 sy ny vahaolana